ZIPHUHLISE NGOKUFUNDA IINCWADI
You are here: Home / News / ZIPHUHLISE NGOKUFUNDA IINCWADI
Icandelo lezemfundo kunye nethala leencwadi lakwaMasipala, bebesingathe umbhiyozo wokubhiyozela iveki yokufundwa kweencwadi eMzantsi Afrika, ngomhla wesibini kuSeptemba, kwiholo kaMasipala wakwaBaca.
Le nkqubo kaZwelonke yokubhiyozela ukufundwa kweencwadi eMzantsi Afrika, lilinge elibalulekile ekukhuthazeni ilizwe lonke ukuba lixabise ukufunda, kuba ukufunda kwandisa, kuphuhlise ulwazi lomntu. Ukufunda kutshintsha impilo nokucinga komntu, kumenze akwazi nokuphucula ikamva lakhe.
Lo mbhiyozo ubuzinyaswe ngabafundi bezikolo ngezikolo eziphantsi koMzimvubu. Ezi zikolo zithe zazigqatsa kukhuphiswano lwezizigaba zilandelayo : upelo lwamagama, ukufunda kunyenokushwankathela izicatshulwa kwiincwadi abebezinikiwe. Ibingabafundi abasukela kwibanga lokuqala ukuya kwibanga lesixhenxe.
Kube kuhle ukubona indlela abafundi abebezimisele ngayo kolu khuphiswano, iimbasa zibajongile. Bangenela kuyo yonke imijikelo yokhuphiswano lokupela amagama ngesiLungu nangesiXhosa, kwingxoxo yeencwadi nakuzingelo lwamagama afihlakeleyo (word treasure hunt); kwiziqwentshana abebezinikiwe.
Kugqatso kufanele kubekho ophumelelayo. “Siyababulela bonke abafundi abathabathe inxaxheba kolu khuphiswano, sikwathi halala kwizikolo nakubafundi abathe baphuma emagqabini kolu khuphiswano, nabaza kudlulela kukhuphiswano lweRegion, kuNtabankulu” utshilo utat’uBoyce nolilungu lebhodi yethala leencwadi. Abathe baphumelela ngaba balandelayo:
kupelo lwamagama esiLungu - Sigwili Puseletso - Colana S S S
kupelo lwamagama esiXhosa - Liverpool Anganathi - Zeneth J S S
Ingxoxo ncwadi yesiLungu - Inga Chapha - Senyukele S S S
Ingxoxo ncwadi yesiXhosa - Sanele Nkomokazi - Mbodleni S S S
Uzingelo lwamagama - Sindisiwe - Ngwekazi S S S
PHAMBILI NGOKUFUNDA PHAMBILI!!!!!